Kooxda uu ogolaaday Achraf Hakimi inuu ku biro xilli ciyaareedka cusub oo shaaca laga qaaday – Gool FM
(Yurub) 26 Juun 2020. Warbaahinta Talyaaniga ayaa xaqiijisay in garabka midig ee reer Morocco Achraf Hakimi uu ogolaaday inuu si joogta ah ugu biiro kooxda Inter Milan.
Shabakada “Sky Sports” ee dalka Talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaaday in Achraf Hakimi uu wadahadalo horumar leh kula jiro kooxda reer Talyaani ee Inter Milan, si uu ugu dhaqaaqo inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in wada hadalada u dhexeeya labada dhinac uu gaaray marxalad aad u horumarsan, isla markaana la filayo heshiiska inuu dhaco waqti dhow.
Fabrizio Romano oo ka howlgala shabakada “Sky Sports” ayaa sheegay in kooxda Inter Milan ay miiska u saartay Real Madrid dalab dhan 45 milyan oo euro si ay ula soo saxiixato Achraf Hakimi xagaagan.
Achraf Hakimi ayaa qaab amaah ah ku qaatay kooxda Borussia Dortmund xilli ciyaareedkan, wuxuuna ku soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah, taasoo ay filayeen dadka qaar inuu ku laaban doono kooxda milkiyadiisa iska leh ee Real Madrid.
Klopp oo si xiiso leh kaga hadlay ku guuleysigooda Premier League, kaddib shir jaraa’id uu ka soo muuqday